repaints F. tornado
umbuzo repaints F. tornado
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #588 by Morti_UK
Ingaba ubani naziphi repaints ukuba inkanyamba gr1 ukusuka moya nje.
Ndikhangela 2 sqn RAF. 95th and 100 scschemes engama kunye neminyaka 100 of marham RAF.
Nceda ukuba u nga ukwabelana iilinki kula okanye abanye repaints apha.
Ixesha ukwenza page: 0.308 imizuzwana